आज हरितालिका तीज ‘असल वधु पाउन पुरुष पनि बस्न सक्छन् तीजको व्रत’ - Birgunj Sanjalआज हरितालिका तीज ‘असल वधु पाउन पुरुष पनि बस्न सक्छन् तीजको व्रत’ - Birgunj Sanjalआज हरितालिका तीज ‘असल वधु पाउन पुरुष पनि बस्न सक्छन् तीजको व्रत’ - Birgunj Sanjal
आज हरितालिका तीज ‘असल वधु पाउन पुरुष पनि बस्न सक्छन् तीजको व्रत’
१६ भाद्र २०७६, सोमबार ०३:२४
काठमाडौं । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरि तालिका (तीज) पर्व आज महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ ।
‘अटल सौभाग्यको कामनाका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, अविवाहित केटी एवं केटाहरुले असल वर र वधु प्राप्तिका लागि पनि तीजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधान छ’, उनले भने । प्रा. डा. गौतमका अनुसार तीजको व्रत बस्ने पुरुषले गुण सम्पन्न वधु पाउने र विधुर हुनु नपर्ने विश्वास गरिन्छ ।
‘निराहार वा निर्जल व्रत बस्नु पर्दैन’
सत्ययुगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको पौराणिक कथा छ । त्यसैले धेरैले तीजको व्रतमा पानीसमेत नखाई व्रत बसेर महादेवको पूजा गरेमा शुभफल मिल्ने विश्वास गर्दछन् । तर, सबै व्रतालु निराहार नै व्रत बस्नुपर्छ भन्ने नरहेको धर्मशास्त्रविद गौतम बताउँछन् । उनले भने, ‘निराहार, जलाहार र फलाहार गरी व्रतका तीन किसिम छन् । सक्नेले निराहार, नसक्नेले जलाहार र जलाहार पनि नसक्नेले फलाहार व्रत गर्न सक्छन् ।’
स्वास्थ्य ठीक नहुनेले गहुँको रोटी, मकैको रोटी, स्याउ, सुन्तला, केराजस्ता खानेकुरा खाएर पनि व्रत बस्न सक्ने गौतमले जानकारी दिए ।
तीजको व्रतसँग सम्बन्धित एक रोचक धार्मिक कथा छ । स्कन्द पुराणमा लेखिएअनुसार सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर महादेव पति पाउने बरदान पाइन् । तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोज । त्यसपछि पार्वतीले आफ्नो समस्या साथीहरुलाई सुनाइन् । उनका साथीहरुले पार्वतीलाई हरण गरेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए । साथीहरुले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत बसेर महादेवलाई नै स्वामी पाइन् ।
यसरी पार्वती साथीद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका (तीज) को व्रत लिने प्रचलन शुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत छ । संस्कृत भाषाका ‘हरित’ र ‘आलिका’ दुईवटा शब्द मिलेर ‘हरितालिका’ शब्द बनेको छ । जसमा ‘हरित’ शब्दको अर्थ हरण गरिएको र ‘आलिका’ शब्दको अर्थ साथी भन्ने हुन्छ ।
तीजबारे गलत प्रचार
समग्रमा मनोकामना पूर्ण गराउन तीजको व्रतको महत्व रहेको रहेकोे धर्मशास्त्रीहरुको मत छ । आत्मावादी र ईश्वरवादी दुवैले यो व्रत लिने गरेका छन् । व्रत सकाम, निष्काम, नित्य, नैमित्तिक, र काम्य गरी पाँच किसिमका छन् । तीजको व्रत नित्य र काम्य दुवै खालको भएको धर्मशास्त्रीय मान्यता छ ।
तीजको व्रत हिन्दू मात्रका लागि नभई मानव मात्रका लागि भएको कुरा धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ । तर, नेपाली समाजमा श्रीमानको दीर्घायुको कामनाका लागि मात्र तीजको व्रत बसिने भनेर गलत प्रचार भइरहेको वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख डा. देवमणि भट्टराई बताउँछन् ।